“राहतको ब्यबस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? – Narayani Dainik
“राहतको ब्यबस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने बिषयमा भरतपुर युवा संजाल संयोजक संदेश वाग्लेको विचार ।
तपाई हामीलाइ थाहा भयकै कुरा हो संघीय सरकारले ज्यालादारी श्रमिक खोज्नुपर्यो भने टोल टोलमा जाने, संघीय सरकारको संयन्त्र छैन । अहिलेका महानगरका वडा कार्यालय भनेका स्थानीय तहका संयन्त्र हो ।
त्यसो हुँदा वडा कार्यालयबाट पहिचान गर्ने, त्यसलाई केन्द्र बनाएर राहतको कुरा अगाडि बढाउने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाइएको पाहिन्छ ।
श्रमिक को हो, विपन्न को हो, को अभावमा छ भन्ने कुरा वडाका पाँच जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ तिनीहरुले त गाँउ टोल पूरै चिनेका हुन्छन । त्यसबाट राहतको दुरुपयोग पनि हुँदैन, जसले पाउनुपर्ने हो, त्यसैले उसले नै पाउँछ । त्यो क्षमता हामीसँग छ की छैन भन्ने प्रश्न यसमा आउँछ? कुनै न कुनै वडामा अत्यन्तै धेरै जनसंख्या छ । एकै पटक सम्भव नहोला ।
थोरै जनसंख्या भएको वडामा समस्या नहोला, सहज नै हुन्छ । तर, ठूला र धेरै जनसंख्या भएका महानगरका वडामा वडा कार्यालयले स्वयम्सेवक परिचालन गर्न सक्छ । प्रत्यक वडामा युवा संजाल , टोल विकास संस्था ,आमा समूह, रेडक्रम, स्काउट आदीलाइ पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।
सबै स्वयम्सेवक संस्था परिचालन गरेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा राहत कोष बनाउन सकिन्छ । अनि सबैले यो बिपतको घडीलाई आफ्नो ठाउँबाट सम्मयमित भएर निर्मुल पार्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा सामाजिक सञ्जालमा रहेकाले सही सूचना मात्र प्रवाह गर्ने । सही सूचना मात्रै शेयर गर्ने, अनावश्यक त्रास र भय सिर्जना गर्ने काम कोही कसैले पनि गर्नुहुदैन ।
भरतपुरका उद्धव अर्यालले निःशुल्क एम्बुलेन्स सरह सेवा दिने